Assassin's Creed Rebellion: Adventure RPG APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Assassin ရဲ့ Creed ပုန်ကန်: စွန့်စားမှု RPG
Assassin ရဲ့ Creed ပုန်ကန်: စွန့်စားမှု RPG APK ကို
ဒီအလယ်ခေတ်စွန့်စားမှု RPG ဂိမ်းအစဉ်အပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတစ်ပြိုင်နက် Ezio, Aguilar, နာမည်ကြီးဖုန်းကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့ဇွန်, များပြားကွဲပြားခြားနားသော Assassin ရဲ့ Creed ဇာတ်ကောင် Join! Assassin ရဲ့ Creed ပုန်ကန်လုပ်ကြံခံရရဲ့ Creed စကွဝဠာ၏တရားဝင်မိုဘိုင်းအခန်းကဏ္ဍကစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သီးသန့်မိုဘိုင်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ထို Animus ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုအတိတ်ထဲကနေအမှတ်တရများတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက် Assassin ရဲ့ Creed ကနေဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ကစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ခုတည်းညီနောင်များအတွက်အစွမ်းထက်လုပ်ကြံခံရစုဝေးစေ, စည်းလုံးခြင်းနှင့် Templar နှင့်စပိန်ရဲ့နိုငျငံတျော၌ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်သည့် opression ဆန့်ကျင်ဝင်ရောက်စီးနင်း။
•ဒဏ္ဍာရီသူတွေကိုအဖြစ်သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဇာတ်ကောင်အပါအဝင် 40 ဇာတ်ကောင်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူအဖွဲ့ကိုတက်။
•, စုဆောင်း Customize, ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရထားနှင့်သင့်ညီနောင်များတပ်ဖွဲ့များအားကောင်းလာစေရန်နှင့်မော်ကွန်း Quest များအတွက် Templar RAID မှအမြင့်ဆုံးရာထူးရန်သင့်လုပ်ကြံမြှင့်တင်ရန်
•သင့်ညီနောင်များပေါက်အဖြစ်က၎င်း၏အာဏာကိုတိုးမြှင့်နှင့်သင့်လုပ်ကြံခံရ '' ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ, သင့်ရဲတိုက်ဖြစ်ထွန်းစေပါ။
•သစ်အခန်းပေါင်း Build သစ်ကိုဂီယာလက်မှုပညာသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကိုစုသိမ်းသို့မဟုတ်အသစ်ဆေးပညာဖန်တီးပါ။
သင့်ထား၏သံဓါးကိုသှေးနှင့် Templar ရဲ့နိုက်တိုက်များကို ပြင်ဆင်.
• Assassin ရဲ့ Creed အပေါငျးတို့သဒဏ္ဍာရီသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဂီယာနှင့်စွမ်းရည်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် DNA ကိုအပိုင်းအစများစုဆောင်းပါ။
RAID Templar Castle
•အလယ်ခေတ်ကြိမ်ကနေစပိန်နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံတို့တစ်လျှောက်လုံးလျှို့ဝှက် Quest များပေါ်တွင်သင်၏ Assassin ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပို့ပါ။
မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲမှာ Move, ရဲတိုက်, ဘုံဗိမာန်သို့မဟုတ်ပိရမစ်များ၌, Templar ရဲ့ Knight တိုက်ခြင်းနှင့်ဤအခန်းကဏ္ဍကစားဂိမ်းထဲမှာမော်ကွန်းဂီယာများကိုလည်းသိမ်းယူ။
•သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Templar ခိုင်ခံ့သောရဲတိုက် RAID နှင့်၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များရပ်တန့်ရန်သင့်လုပ်ကြံခံရ '' ထူးခြားသောစွမ်းရည်များကိုအသုံးပြုပါ။
•အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Fight, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုတွေမသိမသာချဉ်းကပ်လျှောက်ထား? အမြော်အမြင်ရှိရှိရွေးချယ်ပါ။
TIME က-ကန့်သတ်ထားအဖွစျအပကျြ JOIN
•ပိုပြီးများကိုလည်းသိမ်းယူနောက်ထပ်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေနှင့်မော်ကွန်းအချိန်ကန့်သတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့် Quest များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခြင်းအားဖြင့်သစ်ကိုရှားပါးဇာတ်ကောင်သော့ဖွင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့,
•ဦးဆောင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအခြားကစားသမားကို Join ။ အဆိုပါဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးရောက်ရှိရန်ပင် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်များကိုလည်းသိမ်းယူ!
အဆိုပါ Assassin ရဲ့ Creed အသိုင်းအဝိုင်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်း join:
Facebook မှာ https://www.facebook.com/MobileACR
Youtube ကို https://www.youtube.com/channel/UCsh8nwFp0JhAUbCy3YYB1RA
ဤသည်စွန့်စားမှု RPG ဂိမ်းကစားရန်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ပေမယ့်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ In-app ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင်ဝယ်ယူမှုကို disable နိုင်ပါတယ်။
3G, 4G သို့မဟုတ်ဝိုင်ဖိုင် - ဤ Ubisoft ဂိမ်းတစ်ခုအွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ အန်းဒရွိုက် 4.3 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဗားရှင်းလည်းလိုအပ်ပါသည်။
မဆိုတုံ့ပြန်ချက်? ဆက်သွယ်ရန်: http://support.ubi.com
ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါသလား? ဆက်သွယ်ရန်: http://support.ubi.com
ဒီအလယ်ခေတ်စွန့်စားမှု RPG ဂိမ်းအစဉ်အပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတစ်ပြိုင်နက် Ezio, Aguilar, နာမည်ကြီးဖုန်းကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့ဇွန်, များပြားကွဲပြားခြားနားသော Assassin ရဲ့ Creed ဇာတ်ကောင် Join!
Assassin ရဲ့ Creed ပုန်ကန်လုပ်ကြံခံရရဲ့ Creed စကွဝဠာ၏တရားဝင်မိုဘိုင်းအခန်းကဏ္ဍကစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
, သင့်သံဓါးပွတ်သင့်ရဲ့ဓားသွေးနှင့် Templar ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်!
စပိန်ပုန်ကန်၏ဇာတ်လမ်းပြီးအောင်ဒေသကြီး5Unlock! Alvarado, Torquemada နှင့်ဧဒင်န်ထမ်းများ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းပိုင်းကိုဆင်းခြေရာခံ!
•နယူး Helix Rift ပွဲ - ရွှေလင်းတ၏အရိပ်!
•အသစ်နှစ်ခုသူရဲကောင်းများ - Altair & မာရီယာ Thorpe!
နယူး Elite သင်တန်းခန်း•။
•သစ်ကို Craft ပစ္စည်းများနှင့်အတူနယူးဆင့်5& ဒဏ္ဍာရီဂီယာပစ္စည်းများ။
•ရောညီနောင်များအဆင့် 50 ။
Helix Rift ပွဲများ & Helix Rift စိန်ခေါ်မှုများပိုမိုဆုလာဘ်များအတွက်နယူးအခက်အခဲအလွှာ•။
Assassin ရဲ့ Creed ပုန်ကန်: စွန့်စားမှု RPG
601.93 ကို MB
Knightfall ™: ပြိုင်ဘက်